Xisbiyada mucaaradka iyo Madaxweyne Farmaajo oo maanta kulmaya | Somsoon
Home WARAR Xisbiyada mucaaradka iyo Madaxweyne Farmaajo oo maanta kulmaya
Waxaa saakay lagu wadaa in madaxtooyada Soomaaliya ay ku kulmaan xisbiyada siyaasada ee heesta Shahaadada KMG ee diiwaan galinta guddiga doorashooyinka qaranka iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo.
Kulaan ayaa ka dhaci doona sida la sheegay xarunta madaxtooyada Soomaaliya.
Is araga xisbiyada iyo madaxtooyada waxaa dalbaday madaxweyne Farmaajo waxaana la sheegayaa in labada dhinac ay isla meel dhigayaan sida ay u dhaceeso doorashada soo socta marka lagaaro sanadka 202-ka.
Xubnaha mucaaradka ku ah dowladda Soomaaliya ayaa maalmihii danbe masuuliyinta talada heesa ku ee deehaayeen in ay doonayaan muddo kororsi marka lagaro waqti xeleedkooda
Sidoo kale warar aan ka helnay masuuliyiin ka tirsan madasha xisbiyada qaran oo ay ku midoobeen xisbiyo dhowr ah ayaa sheegaya in aysan ka qeybgaleen shirka u dhaxeeya xisbiyada iyo madaxweyne Farmaajo oo madaxtooyada ka dhacaya maanta.
Arbacadii lasoo dhaafay tudabaadkii tagay ayaa madaxtooyada waxa ku kulmay madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynayashii hore ee dalka sida Shariif Sheekh Axmed Iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo matalaayay madasha xisbiyada qaran oo ay ku midoobeen xisbiyo dhowr ah.
Article horeJubbaland oo ku hanjabtay xil ka qaadis ka dhan ah maamulada degmooyinka G/Gedo
Article socoda Ninkii isku qarxi rabay Gurceel oo maanta lagu maxkamadeynayo Dhuusamareeb